အမျှ – – – အမျှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » အမျှ – – – အမျှ	10
အမျှ – – – အမျှ
Posted by ရာမည on Dec 28, 2014 in Poetry | 10 comments
^^^ အမျှ – – အမျှ ^^^ သူငယ်ချင်း ….
ကုသိုလ်ရှင်လို ရသတဲ့ ။
ဘယ်လိုသာဓုခေါ်မှာလဲ ။ ။
ခင်ဇော် says: အမျှ ဆိုတာ ကောင်းးမှု ကို ပဲ ပေးးးလို့ရတာ ဟုတ်ဘူးးးလားးး ကိုကိုရဲ???
Ma Ma says: ကိုယ်တိုင် တိုက်တွန်း ချီးမွှမ်း စိတ်တူ ၄ပါးနဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကို မျှဝေယူနိုင်ပါတယ်။
ယူချင်ရင် အဲဒီ၎မျိုးနဲ့ ရယူနိုင်သလို
မယူချင်ရင်လည်း အဲဒီ၎မျိုးကို ရှောင်လိုက်ရုံပေ့ါ။
မြစပဲရိုး says: တွေးမိတာပါ။
အချုပ် ထဲ ရောက်နေချိန် တကယ် အသိတရား ရလို့ မာန်စွယ်ကျိုး ပြီး တရားဘာဝနာ ပွါးခဲ့ တိုင်း အမျှ ဝေ တဲ့ ထောင်ဝတ်စုံ နဲ့ သူ ရဲ့ “အမျှ”
ဘုရားတန်ဆောင်း ထဲ မှာ လောဘ၊ မောဟ၊ မာန်၊ အတ္တ တက်ပြီး ငါစွဲ များနေတဲ့ မာန သံ နဲ့ အမျှ ပေး တဲ့ ဘုရားသား ဝတ်စုံ နဲ့ သူ ရဲ့ “အမျှ”
ဘယ်ဟာက ပိုပြီး မြင့်မြတ်မလဲ ဆိုတာ။
ရာမည says: အရီးလေးခင်ဗျာ
ဟီဟိ အရီးလေးတို့ကလည်း ကဗျာအဓိပ္ပါယ်ကို အတည့်ဘာသာပြန်နေတာပဲ
ဆရာတက္ကသိုလ်မင်းမော် ရေးသလို တုပပြီးရေးတာပါခင်ဗျာ
ဆရာမင်းမော်လည်း သရော်လွန်း ဆော်လွန်းလို့ ဆင်ဆာထိခဲ့တာ အများကြီးပါ
ကျွန်တော် ချိန်ပစ်တာ အရီးလေးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မြစပဲရိုး says: ရိပ်မိလိုက်ပါတယ် ကိုရာ ရယ်။ lol:-))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: .ကိစ္စမရှိပါဘူး…
.အမျှချင်း ( လဲ ) ကြတာပေါ့..
kyeemite says: .အမျှ…အမျှ…အမျှ…ယူတော်မူကြပါကုန်လော့ ( မယူလည်းရပါတယ်) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: အကုသိုလ် များလွန်းရင်အမျှ မယူနိုင် ဘူးဆို
Wow says: အာ့ ဘာကိတ်စ မလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 53
min kyansix says: ထောင်မှာချုပ်ထား ရာဇဝတ်သားဆိုသော်ညားလဲ
အကုသိုလ်ကို အမျှဝေသူဟူ၍ မကြားဖူး မမြင်ဖူးပါ
သခိုးလူဆိုး မှန်သော်လဲ ကုသိုလ်လဲသူတို့မှာ ရှိတက်ပါသည်
အချုပ်ထောင် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဒါန သီလ ဘာဝနာကို